Ọ bụ Chineke na-enyere mmadụ ezigbo aka (1-9)
Ịnyịnya ndị Ijipt bụ anụ ahụ́ (3)
31 Ndị na-agakwuru ndị Ijipt ka ha nyere ha aka ga-ata ahụhụ.+ Ha na-atụ anya na ịnyịnya ga-enyere ha aka.+ Obi siri ha ike na ụgbọ ịnyịnya agha dị ọtụtụ ga-enyere ha aka. Obi sikwara ha ike na ịnyịnya agha* ga-enyere ha aka maka na ha siri ike. Ma, ha anaghị atụ anya ka Onye Nsọ Izrel nyere ha aka. Ha achọghịkwa Jehova. 2 Ma, Chineke ma ihe. Ọ ga-emekwa ka ọdachi dakwasị ha. Ọ gaghị ahapụ imezu ihe o kwuru. Ọ ga-ata ndị na-eme ihe ọjọọ ahụhụ. Ọ ga-atakwa ndị na-enyere ndị na-eme ihe ọjọọ aka ahụhụ.+ 3 Ndị Ijipt bụ ụmụ mmadụ nkịtị. Ha abụghị Chineke. Ịnyịnya ha bụ anụ ahụ́. Ha abụghị mmụọ.+ Mgbe Jehova ga-agbatị aka ya,Ndị a na-enyere aka ga-ada. Ndị na-enyere ha aka ga-adakwa. Ha niile ga-ala n’iyi otu mgbe. 4 Jehova gwara m, sị: “Ọ na-abụ ọdụm siri ezigbo ike nọrọ n’elu anụ o jidere na-agbọ ụja,A kpọkọgodị ndị niile na-azụ atụrụ ka ha chụpụ ya,Mkpu ha na-eti anaghị emenye ya ụjọ. Mkpọtụ ha na-eme anaghịkwa eme ka ọ gbaa ọsọ. Otú ahụkwa ka Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-esi gbadata ka ọ lụọ aghaN’ihi Ugwu Zayọn nakwa n’ihi ugwu nta dị na ya. 5 Otú ahụ nnụnụ si eji ọsọ fere bịa ka o chebe ụmụ ya ka Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-esi bịa chebe Jeruselem.+ Ọ ga-echebe ya, zọpụtakwa ya. Ọ ga-emere ya ebere, gbatara ya ọsọ enyemaka.” 6 “Ndị Izrel, lọghachikwutenụ Chineke, onye unu kpachaara anya nupụrụ isi.+ 7 N’ihi na n’ụbọchị ahụ, onye ọ bụla n’ime unu ga-ajụ chi ya na-abaghị uru, ndị e ji ọlaọcha mee, na chi ya na-abaghị uru, ndị e ji ọlaedo mee. Unu ji aka unu mee ha. Ọ bụkwa mmehie. 8 A ga-eji mma agha na-abụghị mma agha mmadụ gbuo ndị Asiria. A ga-ejikwa mma agha na-abụghị mma agha mmadụ memilaa ha.+ Ha ga-agba ọsọ n’ihi mma agha. A ga-amanyekwa ụmụ okorobịa ha ịrụ ọrụ. 9 Onye ha weere ka nnukwu nkume ga-anwụ n’ihi ụjọ. Ndị isi ha ga-atụkwa ụjọ n’ihi ihe ahụ na-agba àmà.” Ọ bụ Jehova,Onye ìhè* ya dị na Zayọn, onye ekwú ya dịkwa na Jeruselem, kwuru ihe a.
^ Ma ọ bụ “ọkụ.”